Akụkọ - 2020 Nkeji abuo nke Azụmaahịa · Ọsọ ọsọ na oke iwe
Nzukọ nke abụọ nke 2020 nke iri na anọ · Ọsọ ọsọ na oke iwe
Na elekere asatọ nke ụtụtụ na July 5, 2020, a na-eme nzukọ nzukọ azụmaahịa nke abụọ nke Kaihua Mould na oge na ụlọ nzukọ ogbako nke Tongji Huangyan Rural Revitalization College.
Onu ogugu ndi ahia ahia 65 na ndi isi ndi isi na Huangyan Isi ulo oru na Sanmen Factory sonyere na ogbako ahia a. E kewara ogbako a na isiokwu abụọ:
Nzukọ ahịa ahịa nke abụọ nke 2020
Oke nrute nke ano “ososo.”
Oge magburu onwe ya nke nzukọ ahịa
Na mbido nzukọ ahụ, Onye isi oche Liang Zhenghua kwuru okwu.
Nke mbu, onye isi oche Liang Zhenghua kesara data "Ọnụ ọgụgụ ngwụcha nke usoro iwu na nkeji nke abụọ bụ 101%, na arụmọrụ ahụ rịrị elu na 35% kwa afọ." Onye isi oche Liang Zhenghua gosipụtara n'ụzọ zuru ezu arụmọrụ nke ndị na-ere ahịa nọ na nkeji iri na ise gara aga wee gosipụta ekele ya nye onye ọ bụla. Mgbe ahụ, ọ mere nyocha miri emi banyere gburugburu ahịa dị ugbu a, gwa onye ọ bụla banyere mgbado na ntuziaka ọrụ nke nkeji iri na ise na-esote, wee wepụta okwu anọ dị mkpirikpi: "obere oge", "ahụmịhe ndị ahịa", "ngwaahịa ndị ọhụụ", "ndị ahịa" onye òtù ọlụlụ ”.
Nke ọzọ, ndị ọrụ ahịa ọ bụla bịara n'ọkwá iji kọọ nchịkọta ọrụ nke nkeji iri na ise gara aga na atụmatụ ọrụ maka nkeji nke ọzọ.
Gina, Director Director nke Foreign Marketing Department, kesara onye ọ bụla: “N'ihi mmetụta nke ọrịa ndị si mba ofesi, eyigharịrị ụfọdụ ngosi ma ọ bụ ọbụna kagbuo, yana ụzọ nke ndị ahịa na-eleta nwekwara ike yigharịrị na 2021. Onye ọ bụla nọ ya ga-enwerịrị na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe ọnọdụ ha, ma na-agbakọ, n'agbanyeghị otu esi emekọrịta ndị ahịa n'akụkụ niile! ”
Ndị isi ụlọ ọrụ ahụ weere ọnọdụ ahụ otu otu iji kọọrọ mmetụta ha na nkeji nke abụọ na ntụzi nke imezi na nkeji afọ ọzọ.
Liu Qingjun, onye isi oche ndị isi oche nke isi ụlọ ọrụ Huangyan
Liang Zhengwei, onye isi osote onye isi ụlọ ọrụ Sanmen
Ndị nlekọta ngalaba
Ọsọ & Iwe
“Di——” Mgbe onye nchịkwa nchịkwa fụrụ mkpọrọhịhị, ọrụ mgbasa ozi a malitere.
Ọrụ ọbịbịa a bụ nke mejupụtara akụkụ 4, "Icebreaker", "Chama Aka Onwe Gị: Elu Tightrope Walk", "Otu 150, Ike Circle" na "Obi ụtọ BBQ".
Ka anyị nwee obi ụtọ na ikuku ahụ n'emume ọnụ!
Mmezu sitere na otu, otu a na-emekwa onwe ya.
Egwuregwu ice-na-agbaji na-agbaji ihe mgbochi dị n'etiti mmadụ, na -emepụta ọnọdụ nkwukọrịta dị mma, ma na-eme ka ịnụ ọkụ n'obi na mmụọ ọgụ nke ndị otu egwuregwu.
"Elu-elu tightrope ije"
Site na mbido juputara n'olileanya, nzọ ụkwụ a na-aga n'etiti meteor, ntakịrị ntakịrị na-ala azụ ịga n'ihu, n'okpuru nkpu na agbamume nke ndị mụ na ha na-eme, site na ọkwa kachasị sie ike, na-achọpụta ebe dị anya, na-ewere nzọụkwụ siri ike, ma na-eru nso na njedebe nzọụkwụ site nzọụkwụ. Iru ihe mgbaru ọsọ ma maa onwe gị aka.
“Otu 150, Ike Gburugburu”
Nkewa nke oru, agbamume, ikwenye ntụkwasị obi, nwere oke n'etiti ihe na-agaghị ekwe omume.
N’abalị na-abịa, ikuku ka na-ekpo ọkụ
"Obi ụtọ BBQ" kwupụtara mmeghe
Kaihua Hummingbirds tere aka na mgbada nke obodo ahụ
Jiri obi ekele zuru oke maka ikuku dị egwu nke njikọta otu na okike
Rụkọta ọrụ ma maa onwe gị aka
Mee ka otu ndi otu na mmekorita na nghọta na ntụkwasị obi n’etiti ndi otu
Otu, otu ndi otu
Daalụ maka nzukọ